दोलेन्द्र सर किन लोकप्रिय? | BodhiTv
दोलेन्द्र सर किन लोकप्रिय?
दोलेन्द्र सरले धेरै धर्मका कुराहरू सुन्नु भएकोले उहाँको व्याख्यामा अरू धर्मले पनि रोचक बनाएको हुन्छ भन्ने होइन । यस्तो भ्रमबाट बच्नु होला। अरू धर्महरूको अध्ययन र श्रवणले ती धर्ममा भएका कमी कमजोरी तथा दोषहरू थाहा हुन्छ र त्यस्ता दोषहरू बुद्धशिक्षामा पनि छ कि? कुनै रूपमा झल्किन गएको छ कि? भन्नेे कुराको होस आउँछ।
आफ्नो व्याख्यामा त्यस्ता दोषहरू रहित शुद्ध बनाउन सकिन्छ।नेपालमा भारतको हरेक कुराको प्रभाव परेको हुन्छ। यो हजार वर्ष पहिलेदेखि हुने गरेको हो र अहिले पनि भईरहेको छ । भारतमा बुद्धधर्मको विनाश गराईयो।बुद्धले आफ्नो जीवनको अमूल्य ४५ वर्ष लगाएर भारतमा शुद्ध बुद्धशिक्षा आफ्ना शिष्यहरू कसैमा रत्तिभर पनि शंका नरहने गरी फैलाउनु भएको थियो । बुद्धको महानिर्वाण पछि नालन्दा र तक्षशिलामा ठूला बुद्धशिक्षाका विश्वविद्यालयहरू स्थापना भएका थिए । ती सबै मुसलमान शासकहरू र शंकराचार्यले विनाश गरेर फेरी उत्थान हुन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याईदिए। भारतमा स्वार्थी असामाजिक तत्वहरूले हिन्दू धर्ममैं पनि विकृति भित्र्याई मौलिक हिन्दूदर्शनलाई विकृत बनाई सकेका थिए ।
अहिले विश्वमा बुद्धको लोकप्रियता बढदै गए पछि बुद्धकालिन ऐतिहासिक स्थलहरू हेर्न आउने पर्यटकहरू बर्मा, थाईलाण्ड, कोरिया, जापान, लाओस, भियतनाम, चीन, श्रीलङ्का आदि मुलुकहरूमा ओईरो नै लागेको देखे पछि भारत उनीहरूको नजरबाट ओझेल नपरोस भन्ने् उद्देश्यले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले “भारत बुद्धको देश हो” भनेर विदेश भ्रमणमा जाँदा बोल्ने गर्दा शंकराचार्यले भारत बुद्धको देश भन्नलाई भारतमा बुद्धको के देन छ? भन्ने प्रश्न गर्‍यो । बुद्ध र बुद्धशिक्षा प्रति यस्तो थिचोमिचो भएकोले भारत र नेपालका मानिसहरूले शुद्ध बुद्धधर्मका लवजहरू विर्सन थाले। सबैको माथिङ्गलमा हिन्दू दर्शनले व्याप्त भयो।बुद्धशिक्षाको व्याख्यामा हिन्दू दर्शनको छायाँ पर्न थाल्यो। बुद्धधर्मका व्याख्याताहरूको मुखबाट हिन्दू लवजहरू अनायास आफै निस्कन थाले र शुद्ध बुद्धशिक्षा प्रचलनमा आउन गाह्रो भयो।
अहिले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो गृहराज्य गुजरातमा एक विशाल बुद्धको मूर्ति स्थापना गर्न लागेको खबर सुन्दा खुशी लागेको छ । हामी पनि चाहन्छौं भारत बुद्धको देश बनोस्। नेपाल बुद्ध जन्मेको देश हो। भारत बुद्धले बुद्धत्व प्राप्ति पछि पनि ४५ वर्ष वसोवास गरेर आफ्नो ज्ञान प्रचार गरेको देश हो। तर इतिहासलाई झूठल्याउने नक्कली कपिलवस्तु बनाउने जस्ता काम चाहिं भारतले छोडोस्।
अब आफ्नो शुरू गरेको विषयमा केन्द्रित हौं।नेपालमा पनि धर्म जगत हिन्दूमय भईदिंदा समाजमा छुवाछूट जस्ता विकृतिहरू पनि विद्यमान हुँदा बुद्धधर्मको व्याख्यानमा विकृति आउनु स्वभाविक हो । दोलेन्द्र सर सद्धर्मको खोजीमा रहनु भएकोले खोज अनुसन्धान नै उहाँको स्वभाव भईदिएकोले आफ्नो व्याख्यानमा सद्धर्म देखि बाहिरको लवजहरू, धारणाहरूले आक्रान्त पारेको छ वा छैन राम्रैसंग हेर्न सक्नु हुन्छ । एक विकृत लवजले बुद्धशिक्षालाई नै विटुलो बनाई दिन्छ । बुद्धले दिनु भएको शिक्षा मध्यममार्गमा आधारित छ। तर कति पटक बुद्धशिक्षाका व्याख्याताहरूले त्यो मध्यम मार्गलाई छोडेर बाहिर बाहिरै विचरण गरेको भेटिन्छ । दोलेन्द्र सरले त्यस्तो बाट आफ्नो व्याख्यानलाई पूरै बचाउनु भएको छ । विभिन्न धर्महरूको अनुभवले सद्धर्म देखि बाहिरको तत्वलाई उहाँले राम्रोसंग थाहा पाउनु भयो । भाइले आफ्नो दाइको यस्तो तारिफ गरेको भन्नेे तिर नजानु होला।उहाँको किताब म भ्याए सम्म उपलब्ध गराउन कोशिश गर्छु । पढेर सद्धर्मको जानकारी लिनु होला।